CudaText 1.161.0 dia efa navoaka ary ireo no zava-baovaony | ubunlog
Darkcrizt | 30/04/2022 08:30 | Nohavaozina amin'ny 30/04/2022 17:45 | Software
Nambara ny famoahana ny CudaText 1.161 vaovao, tonian-dahatsoratra mivelatra amin'ny sehatra misokatra, nosoratana tamin'ny Free Pascal sy Lazarus.
Ny tonian-dahatsoratra dia manohana ny fanitarana Python ary manana tombony maromaro amin'ny Sublime Text, ankoatry ny fananana endri-javatra manodidina ny fampandrosoana tafiditra ho toy ny plugins.
1 Fampisehoana vaovao lehibe an'ny CudaText 1.161.0
1.1 Ahoana ny fametrahana CudaText amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
Fampisehoana vaovao lehibe an'ny CudaText 1.161.0
Tamin'ny taona taorian'ny fanambarana teo aloha, Ny baiko dia nampiharina izay mandika ny fiasan'ny Sublime Text: "Mametaka sy manindrona", "Mametaka avy amin'ny tantara", ary koa ny fanatsarana ny baiko "carets extend", izay mampitombo tsara ny carets ankehitriny rehefa mamakivaky andalana fohy.
Ao amin'ny drag and drop text blocks function, cursor marina kokoa no aseho, dia azo taritina avy amin'ny antontan-taratasy vakiana ihany, miampy amin'ny analogy amin'ny Sublime Text, Ctrl + "tsindrio ny bokotra fahatelo totozy" ary Ctrl + "horonana miaraka amin'ny kodiarana totozy" dia atao.
Ao amin'ny mpitantana ny tetikasa dia nampiana "sessions embedded", izany hoe, fivoriana izay voatahiry mivantana ao amin'ny rakitra tetikasa ary tsy hita afa-tsy ao anatin'ny tetikasa. Ho fanampin'izany ao amin'ny mpitantana ny tetikasa, misy plugin atolotra ho an'ireo entana ampiana ao amin'ny menu context: "Misokatra amin'ny fampiharana default", "Mifantoha amin'ny mpitantana rakitra". Ary koa, ny baiko "Go to file" dia nafaingana.
Nampiana fanondro mankany amin'ny fifanakalozan-kevitra "Hanova". izay mamela ny fanafoanana ny fanoloana RegEx rehefa manolo sy manatsara ny fanovana tsipika lehibe amin'ny fomba tsipika "voafono", dia haingana kokoa ny fanovana ho an'ny tady 40 tapitrisa.
Safidy nampiana "fold_icon_min_range", izay manafoana ireo sakana kely loatra, ny mpijery sary dia manohana endrika maro kokoa: WEBP, TGA, PSD, CUR, miampy ny lojika Undo ho an'ny tranga fanovana sasany dia natao mitovy amin'ny Sublime Text ary ny espace Unicode dia aseho amin'ny hexadecimal.
Ankoatr'izay, ny mpamoaka lahatsoratra dia mitahiry ny rakitra session isaky ny 30 segondra (ny elanelana dia apetraka amin'ny safidy), nanampy fanohanana ny bokotra totozy Extra1/Extra2 hanendry baiko ho azy ireo, ary nanampy ny "-c" baiko andalana », izay mamela anao hampandeha izay plugin commande amin'ny fanombohana ny programa.
Ho an'ny Lexers, nohatsaraina ny hazo kaody ho an'ny CSS lexer, Asehoy tsara izao ny node hazo na dia ao anatin'ny antontan-taratasy CSS nohamafisina (nopotehina), raha ao amin'ny Lexer Markdown, ny fanohanana ireo sakana "mifefy" rehefa ampiana sombintsombiny miaraka amin'ireo lexers hafa ao amin'ilay antontan-taratasy, ary ny lexer "ini files" dia nosoloina a "maivana" lexer hanohanana rakitra lehibe.
Ahoana ny fametrahana CudaText amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
Ary farany, ho an'ireo izay liana te-hametraka ity code code ity amin'ny rafitr'izy ireo dia azony atao amin'ny fomba roa samy hafa.
Ny voalohany dia tsotra fampidinana ny fonosana deb an'ny rindrambaiko ary manatanteraka ny fametrahana an'ity amin'ny manager manager tianao indrindra na amin'ny terminal.
Ny fomba faharoa dia alaina ny fonosana binary an'ny editor, izay amin'ny fomba fijerin'ny tena manokana dia feno kokoa ary tsy izy satria misy tsy fitovizany amin'ny tonian-dahatsoratry ny endrika binary mankany amin'ilay efa namboarina ho an'ny Ubuntu na ny derivatives.
Raha tsy izany dia ampidirina miaraka amin'ilay mimari-droa ny rakitra sasany, izay fampianarana hianarana ny fomba hampiasana ny tonian-dahatsoratra.
Miroso amin'ny fomba voalohany, izay hataontsika dia lohany mankamin'ity rohy manaraka ity izay ahafahantsika mahazo ny fonosana deba.
Raha vantany vao vita ny fampidinana dia afaka manatanteraka ny fametrahana amin'ny manager manager na avy amin'ny terminal isika amin'ny alàlan'ny fametrahana ny tenantsika ao anaty folder izay nanaovana ny fisintomana ary nitendry ity baiko manaraka ity:
Raha ho an'ny binary fotsiny andao hisintona ny fonosana "CudaText linux x64 qt5" na "CudaText linux x64" izay ao amin'ny gtk ity farany.
Raha hamafana ny fisie ilay rakitra tsy maintsy ataontsika amin'ny baiko ity:
Ary ao anatin'ny fampirimana no misy ny mimari-droa izay azontsika atao amin'ny alàlan'ny fanindriana indroa ao aminy.
Raha misintona ny fonosana ho an'ny rafitra fiasa hafa dia azonao atao izany avy amin'ny rohy etsy ambany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Software » Ny CudaText 1.161.0 dia efa nivoaka ary ireo no vaovao
Ny raharaha Gnome manohitra ny troll patanty Rothschild dia tsy manan-kery ho an'ny Gnome